Ntinye Ngwa Lathe
Ngwá ọrụ ndị e jiri mee ihe na lathe bụ ngwá ọrụ lathe. A nwekwara ike iji hazie oghere dịka ihe eji egwu egwu, ịkụgharị ihe, nsị nsị, yana ngwa ndị nwere eri dịka taps na ezé efere.
Kwụígwè lathenwere ọtụtụ teknụzụ. Ọ nwere ike ịhazi ọtụtụ ụdị dị iche iche, dịka cylinder dị n'ime na nke dị n'èzí, cone, uzo mgbanaka, na-akpụ ihu elu, ọdụ ụgbọ elu na eri dị iche iche. Ọ nwekwara ike ịkụ ala, gbasaa, tụnyere oghere na njiko. A na-ahụkarị ụdị elu nke usoro lathe nwere ike ịhazi na ọnụ ọgụgụ ahụ.
Isi ukporo nkeengine lathebụ ngagharị nke spindle, na mmeghari nri bụ mmeghari usoro nke ngwa. A na-egosiputa nri site na mmeghari nke ngwa oru site na spindle, na M / R. Mgbe ị na-atụgharị eri, enwere naanị otu isi ihe na-emegharị, ya bụ, ịghagharị agagharị, nke nwere ike ịgbagha n'ime ntụgharị ntụgharị na ntụgharị ngwaọrụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhazi usoro ngwa ngwa, ma ọ bụ na ị nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ihe eji arụ ọrụ ka a ga-emepụta ọtụtụ ma mepụtaCNC anwụrụ threading lathebụ ezigbo nhọrọ. Na mgbakwunye, enwere ụfọdụ mmegharị enyemaka dị mkpa na lathe. Dịka ọmụmaatụ, iji hazie ajị ahụ na nha achọrọ, lathe kwesịrị inwe mmegharị ọnwụ (mmegharị ihe na-adịkarị n'akụkụ nke usoro mmegharị nri, onye ọrụ ahụ na-ejikwa aka ya na-ejide ihe eji eme ihe) . Fọdụ lathes na-enwe ngwangwa ogologo oge na mpụta nke onye na-ejide ngwa ọrụ.
Ihe bụ isi nke lathe ahụ kwụ ọtọ bụ nke kachasị dị omimi nke ihe eji arụ ọrụ na akwa, na nke abụọ bụ ogologo ogologo nke ọrụ ahụ. Abụọ abụọ a na-egosi oke oke ogo nke ihe eji arụ ọrụ lathe, ma gosipụta oke akụrụngwa akụrụngwa, n'ihi na isi ihe na-ekpebi ogo axis nke spindle site na ọdụ ụgbọ mmiri nke lathe ahụ, na isi ihe nke abụọ na-ekpebi ogologo nke akwa lathe.
Kwụ lathe tumadi n'ibu iche iche iche iche nke axle, uwe na diski akụkụ. E gosipụtara ọdịdị ya na ọnụ ọgụgụ ahụ, otu ndị mejupụtara ya bụ akụkụ atọ.
Components gunyere spindle box, ihe njide ihe, tailstock, feed box, slide box na bed, wdg.
Kwụ lathe udi
1 isi nri
2 njide mma
5 ụkwụ ụra ziri ezi
Ogwe ọkụ 6
8 eji igbe
9 aka ekpe
10 igbe nri
11 nghọta wheel usoro
I. Igbe mkpọ
The headstock na ofu na n'aka ekpe n'akụkụ nke ihe ndina, na isi aro na agbanwe ọsọ nnyefe usoro arụnyere n'ime, na workpiece na-clamped ka n'ihu njedebe nke spindle site na Chuck. Ọrụ nke isi ụlọ bụ ịkwado isi osisi ma nyefee ike na isi osisi site na usoro nnyefe ọsọ ọsọ, nke mere na isi osisi na-eme ka ihe nrụpụta ahụ gbanwee ka ọ na-agagharị na ọsọ ọsọ edepụtara iji ghọta isi ihe.
2. Onye ji ngwa ọrụ
A na-etinye ihe njide ihe eji eme ihe n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè nke ihe ndina ma nwee ike ịkwaga ya ogologo oge na usoro nduzi ahụ. Akụrụngwa njide ihe mejupụtara nwere ọtụtụ ọkwa nke ndị na-ejide ngwa ọrụ. Ọrụ ya bụ ijigide ngwa ntụgharị maka ogologo oge, mpụta ma ọ bụ oblique feed motion.
3. Tagbọ mmiri
A na-etinye ọdụ ọdụ na ihe njide ihe eji arụ ọrụ nke ihe ndina ma nwee ike gbanwee ogologo oge. Ọrụ ya bụ iji aka elu rụọ ọrụ dị ogologo iji kwado ọrụ ahụ dị ogologo, ma ọ bụ ịwụnye ngwá ọrụ oghere dị ka ihe egwu egwu ma ọ bụ mma mkpọpu maka oghere oghere. Wụnye bit na tailstock, The workpiece nwere ike gbapuru iji mee ka lathe ọrụ dị ka a radial mkpọpu ala igweEbe a.
Ihe ndina ahụ dị na ụkwụ aka ekpe na aka nri ya na ọrụ ya iji kwado ihe ndị bụ isi ma jigide ọnọdụ ikwu ma ọ bụ ọnọdụ ziri ezi n'oge ọrụ.
5. Igbe slide
A na-edozi igbe ihe mmịfe ahụ na ala nke ihe eji eme ihe iji mee ka onye na-ejide ngwa ọrụ jikọọ ọnụ na ntụziaka ogologo oge. Ọrụ ya bụ ịgafe igbe nri site na ogwe ọkụ.
A na-ebute ngagharị site na (ma ọ bụ na-eduga ndu) na onye na-ejide ngwá ọrụ, na-ekwe ka onye na-ejide ngwá ọrụ nweta nri ogologo oge, nri mpụta, mmegharị ngwa ngwa ma ọ bụ threading. Aystụrị ọ variousụ ahụ dị iche iche ma ọ bụ bọtịnụ dị iche iche.
6. Igbe nri
A na-edozi igbe oriri na n'akụkụ aka ekpe nke ihe ndina ahụ, ma nwee usoro mgbanwe na-agbanwe agbanwe maka ịgbanwee ndepụta nri moto ma ọ bụ na-eduga eriri eri.
Lathe ọrụ nzọụkwụ
1. Nnyocha tupu ịkwọ ụgbọala
1.1 Jupụta eserese igwe na griiz kwesịrị ekwesị.
1.2 Lelee ụlọ ọrụ eletriki nke ngalaba ọ bụla, njikwa, akụkụ nnyefe, ngwaọrụ nchebe na njedebe zuru oke ma nwee ntụkwasị obi.
1.3 Ngwongwo ọ bụla kwesịrị ịdị na ọnọdụ efu, eriri ahụ kwesịrị ịdịgide.
1.4 A naghị ekwe ka akwa akwa ahụ chekwaa ihe ọla ka ọ zere imebi ihe ndina ahụ.
1.5 Ihe a na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, enweghị ájá apịtị, gbochie ájá apịtị ka ọ ghara ịdaba n'ụgbọ ahụ, ma na-egweri okporo ụzọ.
1.6 Tupu arụ ọrụ ahụ agwakọtara ọnụ, a ga-ebu ụzọ mee lathe ule na-agba ọsọ iji gosi na ihe niile dị mma tupu arụ ọrụ ahụ.
2. Usoro ọrụ
2.1 Mgbe ihe eji arụ ọrụ ahụ dị mma, bido ụzọ mgbapụta mmanụ na-ebu mmanụ, ka nrụgide mmanụ wee nwee ike iru ihe akụrụngwa igwe chọrọ tupu ịmalite.
2.2 Mgbe ị na-agbanwe ụgbọelu mgbanwe, mgbe a na-agbanwe wiilị, a ga-ebipụ ike ahụ. Mgbe mgbanwe ahụ, a ga-eme ka mkpọchi niile sie ike, a ga-ewepụ spana ahụ n'oge, a ga-ewepụkwa ihe ahụ maka ịrụ ọrụ.
2.3 Ozugbo ịbịnyechara na ibudata ihe eji arụ ọrụ, wepụ ihe nkedo na-ese n'elu mmiri nke na-arụ ọrụ na nke ọma.
2.4 A gha edozi ogwe aka na nkedo nke akụrụngwa akụrụngwa n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị dịka nhazi chọrọ, ma sie ike ma ọ bụ jikọta ya.
2.5 Ihe eji arụ ọrụ, ngwa ọrụ na ihe eji arụ ọrụ ga-agbakwunye n'udo. Ngwá ọrụ na-ese n'elu mmiri ga-agbatị akụkụ mma n'ime ebe a na-arụ ọrụ iji malite igwe.
2.6 Mgbe ị na-eji etiti etiti ma ọ bụ ihe njide ihe eji arụ ọrụ, a ga-edozi etiti ahụ ma tinye ya nke ọma ma kwado ya.
2.7 Mgbe ị na-arụzi ihe dị ogologo, akụkụ na-apụta n'azụ spindle ekwesịghị ịdị ogologo. Ọ bụrụ na ọ toro oke ogologo, a ga-etinye ebe a na-ebunye ya na akara egwu.
2.8 Mgbe ị na-eri nri, mma kwesịrị ịbịaru ọrụ iji zere ijikọta; ọsọ nke ụgbọ ịnyịnya kwesịrị ịdị. Mgbe ị na-agbanwe ngwa ọrụ, akụrụngwa ahụ kwesịrị ịnọ ebe kwesịrị ekwesị site na ebe ọrụ ya.
2.9 A ghaghị ịdọkọta ngwá ọrụ na-egbu osisi, ogologo ogologo nke ngwaọrụ ntụgharị na-abụkarị karịa 2.5 ugboro ọkpụrụkpụ nke mma.
2.1.0 Mgbe ị na-arụ akụkụ eccentric, ọ dị mkpa ịnwe oke mbadamba ihe kwesịrị ekwesị iji dozie etiti ike nke oghere ahụ na ọsọ nke ụgbọala ahụ kwesịrị ịdị mma.
2.1.1. Ọ bụrụ na kaadị ahụ karịrị ihe arụ ọrụ na mpụga fuselage ahụ, a ga-emerịrị usoro nchekwa.
2.1.2 Ndozi nke nhazi ngwa agha aghaghi idi nwayọ. Mgbe ngwá ọrụ n'ọnụ bụ 40-60 mm n'ebe workpiece nhazi ọnọdụ, ntuziaka ma ọ bụ ọrụ ndepụta ga-eji kama nke nri ndepụta.
2.1.3 Mgbe ị na-akpụ faịlụ ahụ na faịlụ, a ga-akpọghachi onye na-ejide ngwá ọrụ ahụ n'ọnọdụ dị mma. Onye ọrụ ahụ kwesịrị iji aka nri n'ihu na aka ekpe ya na ihu ya. A naghị ekwe ka arụ ọrụ ahụ nwere igodo dị n'elu wee hazie ya na faịlụ.
2.1.4 Mgbe ejiri mpempe akwụkwọ hichaa okirikiri nke mpempe akwụkwọ ahụ, onye ọrụ ahụ ga-enwu nsọtụ abụọ nke akwa abrasive ahụ dịka ọnọdụ ahụ akọwapụtara n'isiokwu dị n'elu. Ejila mkpịsị aka jide akwa abrasive iji mee ka oghere dị n'ime ya dị nkọ.
2.1.5 Mgbe akụrụngwa na-akpaghị aka, a ga-edozi obere onye na-ejide ngwa ọrụ ka ọ gbanye ya na isi iji gbochie isi iji kụọ aka.
2.1.6 Mgbe ị na-egbutu nnukwu ma ọ bụ ihe arụ buru ibu ma ọ bụ dị arọ, a ga-ahapụrịrị ọrụ ntinye zuru ezu.
3. Ebe a na-adọba ụgbọala
3.1 Gbanyụọ ike ma wepu ihe eji arụ ọrụ.
3.2 A na-akụtu aka ọ bụla na ọnọdụ efu, a na-ehicha ma kpochaa ngwá ọrụ ndị ahụ.
3.3 Lelee ọnọdụ nke ngwaọrụ nchedo ọ bụla.